wararka maanta-arlaadii.net » AAWAY MASKAXDII WADANKA SOOMAALIYA?
Dalkasta hurumar wuxuu ku garaa had’ba siduu u adeegsao aqoonta, tasoo ah marka aqoonyada talada dalka ay waxku yeeshaan si loo gaaro hurmar ku dhisan aqoon hab dhaqan dhaqaale. Habadaba maxaa ku dhacay aqoonyahadii Soomaaliyeed 1960-1990?
a) Markii xuriyada dalka la qaadanaayay wuxuu gumaystahii ka ilaaliyay aqoonyahnadii Soomaaliyeed, asagoo doonaayo in dowlada badali doonto xukunkiisa uu awood badan ku yeesho. Hadaba maxaa dhacay? Barlamankii ugu horeeyay wuxuu ku guuleeystay gumeeystahii Talyaniga inuu xildhbaanadii inta badan kasoo xulo baadiyaha, kuwasoo inta badan aanan lahayn aqoon sharci dejin, waana sababtaas jabkii ugu horeeyay ee ku dhacay aqoonyahanadii Soomaaliyeed, ayagoo joogo in laga ilaaliyo maamulka dowladooda.
2) Dowladii Miritariga ahayd uu hogaaminaayay Alaha u naxariisto Madaxwayne Mohamed Siyaad wuxuu aaminsanaa in dalka lagu dhaqo Scientific Socialism, tasoo uu lahaa fikirkii Friedrich Engels oo aaminsanaa (social-political-economic) in dalka hurumarin iyo isku filaasho ku gaaro. Dowladii Kacaanka ayadoo fulineeyso fikirkeedi siyaasadeed si dadka loo gaarsiiyo waxay xooga saartay inay ka dhisto degma kastaa xarumo lagu xaqiijiyo inuu fikirkaas gaaro shacabka ( orientations )
Qaladka ay Sameeyen aqoonyahanadii waxay ahayd markeey arkeen in wadankii uu qaatay siyaasadaas waxay inta badan banaanka ka istaageen siyaasadii dowlada markaasi jirtay, maqnaashahooda waxay fursad siiyay dad badan oo aan aqoon lahayninay inay buuxshaan kaalintoooda, taasna ay sababtay inay banaanka ka istaagaan siyaasadii dalka markale.
c) 1989 -1990 Aqoonyahanadii inta badan kama aysan mid noqon dagaalkii sokeeye, waxayna door bideen inay dalka iskaga tagaan kuwii ku harayna la dilo, tasoo wadankii ku riday wax loogu yeero (Brain Drain) tasoo micnaheedu yahay in maskaxdii dalka ay meesha ka dareertay, waana sababta loo dhisi weeysan yahay wadanka waayo wadan aan maskax lahayn ma dhismi karo.
Hadaba maxaa la gudboon Aqoonyahanadda
Waxaan kula talinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee aqoonta iyo waayo aragnimada u leh maamulka iyo dhismaha Dolwada ee dibada jooga inay dalka dib ugu laabtaan, oo ay dhinac iska dhigaan inay sugaan in dalka dib loogu dhiso waayo yayka sugayaan dib u dhiska dalka?
Waxaan walaalaha aqoonta leh xasuusinayaa in wadankaas dhaqaalahiisa ay wax ku soo barteen hadana la joogo waqtigeey wadanka u gudi lahaayeen waajibaadka uu wadankaas ku leeyahay, waxaan aaminsanahay inay qayb ka noqdaan talada wadankaas lagu badbaadin lahaa. Qofna yuusan sugin in loo yeero, gaalintaada buuxi.
Mahadsanidiin Kuligiin, Ilaaheey Soomaaliya ha barakeeyo
Madaxweyne Shariif Xasan oo si aan caadi aheyn aan horay lo arag loogu soodhaweyay Magaalada Kismaayo”DAAWO SAWIRADA”